Is-xanbaarka is-xanbaartay Ma Xanbaari Karnaa? (Xukuumadda Iyo Xeer-dejinta) Qalinkii – Boobe Yuusuf Ducaale Qormadii: 1aad | Salaan Media
Is-xanbaarka is-xanbaartay Ma Xanbaari Karnaa? (Xukuumadda Iyo Xeer-dejinta) Qalinkii – Boobe Yuusuf Ducaale Qormadii: 1aad
Sidii Guul-wadii,Qalinkii Boobe Yuusuf Ducaale
Ma maqli jirteen: “Is-ma dhaantiyo dhasheed.” Alleylehe waa tan oo kale. Waxa ka sii daran kuwa ay codkooda iyo gacantoodaba ku yimaaddeen ee maantana looga fadhiyo taa shalay dhacday ee aan la mahadin teedii. Odeygii doobta weynaa ee Timacadde ayaa laga hayaa: “Irsiqiinnii waa taad nadalo, ka oggolaateen.”
Nadaladu xilliyada qaar, waxay ahayd mijinta jaadka ah marka afar meelood loo qaybiyo meel. Garo’ oo Odeygu wuxu ka hadlayay doorashooyinkii aan la mahadin ee ma-hadhada reebay ee lixdannadii iyo sidii dadka codkooda looga siisan jiray nadalo jaad ah ama kiish hadhuudhkii cas-casaa ah. Kaasina wuxu ahaa hadhuudh waqtigiisii dhacay oo fardaha Mareykankuba ka khashaafeen oo dadka lagu khiyaamayn jiray, sida maantaba saansaankeedii muuqdo.
Waxa kale oo aynu halkan hambalyo aan duugoobin iyo bogaadinba uga diraynaa Mudane Maxamed Faarax Qabille oo intuu ka gabyay, go’iisiina ka qaatay oo ka hulleelay goobti qarannimada iyo ummadaba aayaheeda lagu ambinayay. Guul iyo Gobannimo dhammaantood. Ilaahay ayaanu gallad iyo gargaarba idiin ka barinnay. Il iyo cawriba la’aada. Aammiin.
“Cashadii gashaba waagu waa, caynad gooniyahe,
Caloolyow aan kugu raagihayn, ciidda haw qodin e’,
Cagta ii dhig waakaa nabsigi, soo cadceedsadaye.”
2. Dar ama koox is-tus ah oo madasha dood kulul ka geysata oo ay ku ambinayaan ra’yiga dadweynaha, marka dambena goroddaa soo laalaadiya oo wax aynaan garanayn oo aynaan geyin la hor qabto ama la hor qaadaba. Doodda kulul ee ay geystaan, wax kale ugama gol laha sida dadka intiisa badani aamminsan tahay oo aan ahayn in ay qiimaha iibka codadka kor u qadaan,
“Nin abwaanana waan ahoo,
Amminna waan gabyayaa,”
Xilow ba’! Haddii xaynka loo sudhay nimaan xilba dhibayn……Nimaan xilba solin…….Nimaan ku xasilin…..Nimaan ku xamdiyin. Nimaan xeer iyo xaagaanba wixii uu lahaa aan marin. Wixii laga xishoon jiray ayaa lagu xarragoonayaa. Oo weliba inta xariir loo xidho lagu xafladaynayaa. Niman aynu xulannay oo xoolaheennii ku doorannay ayaa xilkoodii baal-maray oo hadba xeer baas ku qadhaabanaya. Xil-dhibaanno ayaynu u naqaannaa, waa se xil-ma-dhibeen ma is-tidhaahdeen?
La-ye, markii Golaha wakiillada laga baxayba, Odeyguna saxeex beryahanba lala sugayay ayuu ku duugay. Iyaga iyo Allahood e’, waxay isla dhex marayeen: “Markab taagan oo xoolo badan sida ayaa laga gaadhsiinayay.” Qaar baa moodaya in waddooyin lagu dhisayo. Kuwaas ma-kasta ahi miyaanay ogeyn Hay’addii ‘Somaliland Road Authority’ ee Cigaal iyo Ra’yaaleba hawl-geliyeen ee lagu tamariyay in la tir-tiray. Hadda waxay inoo ahayd weel ay adduunyadu, gaar ahaan EU-du wax inoogu shubto. Beryaha qaarna iyada ayaa Afrikaba u sidatay.